I-Downtown Jackson Condo, Ikhishi Eligcwele #1 - I-Airbnb
I-Downtown Jackson Condo, Ikhishi Eligcwele #1
310 okushiwo abanye
I-iyunithi yokuqasha ephelele ibungazwe ngu-Holly
U-Holly Ungumbungazi ovelele
INQUBOMGOMO YOKUKHANSELA EQINILE: IZILWANE AZIVUNYELWE UKUBHEMA/ azikho IZILWANE EZIVUNYELWE.
IFULETHI le-studio liyi-1 block ukusuka ku-Town Square.
Ifulethi elakhelwe ngaphansi ELINCANE KAKHULU, 400 sq ft.
Akuzifanele izingane ezingaphansi kuka-12.
Umbhede omusha we-Queen, kanye nosofa
omkhulu olalayo Ikhishi elincane, kodwa elinakho konke.
I-TV eqondile/i-Satellite; ayikho i-dvd player
okusheshayo kwamahhala kuyatholakala
Umshini wokuwasha nowokomisa ohlanganyelwayo
osebenzayo Amanzi ashisayo angenamkhawulo
Ayikho Imvume ye-A/C
Siyakwamukela e-Jackson Wyoming! Leli fulethi le-Studio lingenye lezindawo zokuqasha eziseduze kakhulu ne-Town Square edumile enemiqansa ye-Elkhorn efakwe ku-Airbnb! Ngohambo lwezinyawo oluyi-1 kuphela oluya edolobheni uzozithola uzungezwe kukho konke okujabulisayo okuhlanganisa ukudla okumnandi, ukuqhuma kwamagalari obuciko, izinto zakudala zasentshonalanga nezinsalela, ukuthenga, nomlando othakazelisayo we-Wild West.
Ifulethi elisanda kubuyekezwa, ELINCANE KAKHULU,
elingaphansi kwesitudiyo Umbhede omkhulu, kanye nosofa olala esinye isivakashi.
Ikhishi elincane, kodwa elinakho konke. Lungisa ukudla kwasekhaya okuphekiwe! Ilungele ukuhlala isikhathi eside.
Isiqandisini\_ uhhavini ogcwele\_ i-microwave\_ umshini wokwenza ikhofi. Awukho umshini wokuwasha izitsha.
Izinto zokupheka ezivamile: amabhodwe, amapani, izitsha zokupheka, izitsha zokudla ukudla okuyinhloko
Asikho isidlali se-DVD
Esezingeni Eliphezulu I-Oscillating Fan for air movement.
Indawo eyodwa yokupaka yamahhala, izimoto ezivamile kuphela
I-coin yomphakathi/ehlanganyelwayo isetshenziswa umshini wokuwasha\_ umshini wokomisa izinyathelo ezimbalwa nje ukusuka kuyunithi.
OKUQINILE: Empeleni Akuvunyelwe ukubhema\_Azikho izilwane ezifuywayo ezivunyelwe.
Leli fulethi lesitudiyo esingaphansi kwesakhiwo esincane enkabeni yedolobha LINCANE KAKHULU elinamafidi angu-400 sq. Isendaweni engaphansi yesakhiwo "esixubile" esinehhovisi lamazinyo esitezi esiyinhloko kanye nenkampani yokwakha esitezi esiphezulu. Ihhovisi lamazinyo livuliwe ngoMsombuluko-ngoLwesihlanu (7: 00am- 5: 00 pm). Uzozwa umsindo ehhovisi lamazinyo ngalesi sikhathi. Akukho okuzwakalayo kakhulu. Nginikeza imishini yomsindo omhlophe kanye nezindlebe kuwo wonke amafulethi ami uma lokhu kuyinkinga yakho. Noma kunjalo, uzothola ukuthi ithokomele, iphelele, futhi ihlanzeke kakhulu. Ekuqaleni kuka-June 2016 kwavuselelwa kabusha okuhlanganisa indawo entsha yaphansi, upende, ubuciko, nombhede omusha ontofontofo kakhulu. Kukhona ne-sofa sleeper yesinye isivakashi. Indlu yokugezela encane inobhavu ogcwele\_ishawa enamanzi ashisayo angenamkhawulo. Le ndawo ihlanzwe ngobuchwepheshe yisevisi yokuhlanza yasendaweni futhi igcinwa isesimweni esihle.
Njengoba izithombe zibonisa ukuthi kunamafasitela amakhulu angu-2 (angabonakali noma kunjalo) anikeza ukukhanya okuningi. Akuyona into efana nekamelo lendabuko elibandayo, elimnyama, neliyindilinga. Jabulela izindawo zaphansi ezifudunyeziwe ngezinyawo. I-AC ayifakiwe, kodwa akudingeki kakhulu. Iza nomlandeli omuhle wokuzungeza umoya futhi wenze "umsindo omhlophe" uma uthanda.
Indawo yekhishi iphelele ngesitofu esiphelele kanye nesiqandisi. Ine-microwave, umshini wokwenza ikhofi, i-toaster, i-blender, nakho konke okudingayo ukuze wakhe ukudla kwakho okuthandayo (amabhodwe, amapani, nezitsha zokupheka). Ayinawo umshini wokugeza izitsha.
Ukupaka: Kulabo abaye bashuthela e-Jackson ngaphambili, yazi ukuthi ukupaka eduze nedolobha kungaba inselele futhi kube yinto ebuhlungu ngempela ekhanda. Kukhona indawo yokupaka yamahhala endaweni yokupaka engemuva kwesakhiwo ngakho ungashiya imoto yakho endaweni ephephile njengoba uhamba ngezinyawo e-Jackson. Izimoto ezivamile kuphela- akukho omahamba-nendlwana. Lapho uhlala, uzobona ngokushesha ukubaluleka kwale ndawo yokupaka edolobheni efunwayo. Uma ungenayo imoto leli fulethi liseduze nesiteshi sebhasi netekisi. Futhi, leli yunithi lilungele labo abafuna ukuhamba ngezinyawo futhi bajabulele i-Downtown Jackson.
Izitebhisi zangaphandle zinikeza ukufinyelela kule yunithi. Bheka izithombe.
I-Yummy: Ngithemba ukuthi uzosebenzisa ngokunenzuzo isitolo sethu sezinto zokubhaka esiyintandokazi sendawo "Persephone". Iphunga elimnandi lamakhekhe nezinto ezimnandi zizokushiya ulindele ukubuya kwakho. Isidlo sabo sasekuseni esijabulisayo siyindlela enhle yokuqala usuku.
Kunenqwaba yokudla okumnandi nezindawo zokudlela ezinhle ezihambeka ngezinyawo.
Ngiyajabula kakhulu ukwabelana ngaleli fulethi nabanye abafuna ukujabulela i-Downtown Jackson. Ngizophendula ngokushesha nangokucophelela yonke imibuzo onayo ngaphambi nangesikhathi sokuhlala kwakho. Ngingakwazi ukukunikeza izincomo eziningana zokudlela nokwenziwayo uma kucelwa. Ngizibophezele ekwenzeni konke engingakwenza ukuze ngenze ukuhlala kwakho kube mnandi futhi kukhumbuleke.
Idolobha lase-Jackson elisemthethweni\_ ligunyazwe Ukuqasha kwesikhashana iPhemithi # 6754
Ikheli: 200 E. Broadway, iyunithi ye-bsmt #1
Lona ngamayunithi okuqasha angu-1 kwangu-6 kuleli kamelo elakhelwe ngaphansi.
Ilinki yesimiso sokuqasha isikhashana:
4.95 · 310 okushiwo abanye
Bonisa zonke izibuyekezo ezingu-310
UHolly Ungumbungazi ovelele